कुन काम कुन वार गर्दा शुभ र लाभदाइक हुन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
कुन काम कुन वार गर्दा शुभ र लाभदाइक हुन्छ ?
बैशाख ११, २०७८
आज आइतबार यसरी गर्नुहोस् ‘सूर्य देव’को पुजा !!
यस्ता मानिसहरू हुन्छन संसारकै भाग्यमानी !!
सोमबारः यस दिन भगवान शिवको प्रिय मान्ने भएकाले पनि धेरै कार्यहरुको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। विशेष गरि गाइ, भैसी, घोडा, फूल, घाँस, वृक्ष्य, मोति, चाँदी आदिको किन बेच गर्नु, महिलाको संगत गर्नु एकदम शुभ हुनेछ।
मंगलबारः भगवान गणेशको प्रिय दिन हो मंगलबार। यस दिन गणेशजीको विधिवत रुपमा पूजाआजा गरेर जुनसुकै कार्य गर्दा पनि सफलता हँसिल गर्न सकिन्छ।
बुधबारः यस दिन विशेष गरि पुण्य आर्जन गर्ने कामको सुरुवात गर्दा सफलता हँसिल गर्न सकिन्छ। साथै यस दिन वस्तु कला ,चित्रकला र अध्यानमा सोचे अनुसारको फल मिल्ने गर्छ।
बिहिबारः विहिवार विशेषगरि धार्मिक कार्यहरुको सुरुवात गर्नु उत्तम हुने गर्छ। यस दिन मन्दिर निर्माण ,मन्त्र जप ,नवग्रह पूजा गर्दा तपाईको कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेछ।
यस्तो हुन्छ शनिबार जन्मेका व्यक्तिहरुको भाग्य र स्वभाव !
जनशक्ति नहुँदा आईसीयु र भेन्टिलेटर थन्किए , बिरामी ज्यान गुमाउदै !!
कांग्रेससँग भागबन्डा नमिलेपछि कर्णालीका ३ मन्त्रीको नियुक्ति स्थगित !!
दिनदिनै चक्कर आउँदा कुनै गम्भीर रोगको संकेत हुन सक्छ !!
मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउनुका यस्ता छन् फाइदा !
तरल अक्सिजन आयात गर्ने तयारी !!